Abathengisi abaningi bagxila kumasu abo wokumaketha nge-imeyili ngokumane kukhiqize umkhiqizo nokusebenza kwe-imeyili. Lokhu kuphuthelwa ubukhulu obukhulu obunomthelela empumelelweni ephelele yenkampani yakho ukuqhudelana ngokumelene nebhokisi lokungenayo elinqwabelene phezulu ukuze ababukeli bakho balinake.
Ukulethwa Kwe-imeyili - lokhu ukuthi ngabe i-imeyili yakho iyenzile yini ebhokisini lemilayezo engenayo. Lokho kuyinhlanganisela yokuhlanzeka kohlu lwakho lwe-imeyili, idumela lekheli lakho lokuthumela le-IP, ukuba semthethweni komhlinzeki wakho we-imeyili (ESP), ngaphezu kokuqukethwe okukhiphayo. Ngezansi - mangaki ama-imeyili akho akwenze kwibhokisi lokungenayo, ngokugwema ifolda engenamsoco noma ukubhampa. Abantu abaningi abakhathazeki ngalokhu, ikakhulukazi labo abangenayo i-ESP enhle. Noma kunjalo, ukuhanjiswa kungabiza inkampani yakho ilahlekelwe ubudlelwano nemali engenayo. Sisebenzisa 250ok kuya qapha ukubekwa kwethu kwebhokisi lokungenayo.